သင့်အသက်နဲ့မွေးနေ့သာ သေသေချာချာပြောပါ…မှန်လွန်း လို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်နေရတဲ့ ဇနက ဟောကိန်း – Zartiman
တိကျမှန်ကန်လွန်းသော ဇနကဗေဒင် အဟောကြည့်နည်း….
တည်ဆိုတာ သင်္ဘောတည်ဆောက်တာကို ပြောတာပါ။ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ကြံစည်ဆဲ၊ လုပ်ငန်းတွေအစပြုဆဲ အခြေအနေကို ရောက် နေတယ်လို့ ပြောတာပါ။ လုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ရန်ရှာရာတွင်လွယ်ကူလိမ့်မည်။
ပျက်ဆိုတာ သင်္ဘောပျက်သွားတာကို ပြောတာပါ။ ကံဇာတာ ညံ့ချိန်ပါ။ စီးပွားရေးကျဆင်းမယ်။ သူများမကောင်းကြံတာခံရတတ်သည်။ မ တော်တဆထိခိုက်မှု အသေးအဖွဲများ ကြုံတတ်သလို သေကောင်ပေါင်းလဲဝေဒနာများ ဖြစ်တတ်သည်။ ရာထူးလုပ်ငန်းကို နှောင့်ယှက်မည့် သူ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးကို အထူး သတိထားပါ။
ကျောက်ဆိုတာ မေခလာနတ်သမီးက ကျောက်ဖျာထက်မှာတင်ပေးထားတဲ့ ကိန်းဆိုက် ပြီဆိုတော့ ကံကောင်းပြီလို့မှတ်ပါ။ မမျှော်လင့်ပဲ ကူညီမယ့်သူတွေပေါ်မယ်။ အောင်ပါလေသိန်းထီဆုကြီးများ ပေါက်မယ်။ မကျန်းမမာဖြစ်နေရင်တော့ ပြန်ပြီးကျန်းမာလာမယ်။
ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီလို့ဟောပါ။ အမှုရှိရင်ရှိနိုင်မည်။ အချုပ်နှောင်ခံနေရရင် လွတ်မည်။ ကျဆင်းနေသော စီးပွားရေးများ ပြန်တက်လာ မည်။ ပညာရေးလဲကောင်းမည်။ အိမ်ထောင်ကျလျှင် အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းနှင့်တွေ့ပြီလို့ဟောပါ။ အကြံအစည်များ အောင်မြင်မည်။
ထီးဆိုတာ ထီးဖြူဆောင်းတဲ့ကိန်းပါ။ နာမည်ကျော်ကြား ထင်ရှားမည်။ ကောင်းသတင်းနှင့် ကျော်ကြားခြင်းပါ။ ဆုလာဘ်တွေရမည်။ ဘွဲ့ ထူးဂုဏ်ထူးများ ရမည်။ စာမေးပွဲဖြေထားရင် စာမေးပွဲအောင်မည်။ ရာထူးတိုးမည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ရမည်။ အိမ်သစ်ဆောက် ကိန်း၊ အိမ်သစ်ရကိန်းပေါ်မည်။
နန်းဆိုတာ နန်းအပ်ခံရတဲ့ကိန်းပါ။ ကံဇာတာကောင်းပြီလို့ဟောပါ။ ရာထူး တိုးမည်။ စီးပွားဖြစ်ထွန်းမည်။ အမွေအနှစ်တွေရမည်။ အပြိုင် အဆိုင်တွေမှာ အနိုင်ရမည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရင်နိုင်မည်။ အိမ်ထောင်ကျကိန်းရှိသည်။ အိမ်ထောင်ကျလျှင်လဲ ကံ ကောင်းမည်။ အလှူပြုလုပ်ရမည်။ မင်းစိုးရာဇာ အကြီးအကဲဖြစ်မည်။
စံဆိုတာ မင်းစည်းစိမ်ကိုခံယူရတဲ့ကိန်းပါ။ ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းပြီး စုတ်ကြီး၊ လာဘ်ကြီးတွေဝင်မည်။ လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်မည်။ ကြီးမား တဲ့ရာထူးတွေရမည်။ သိုလှောင်ပစ္စည်းတွေက အကျိုးအမြတ်ရမည်။ အခြွေအရံမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း တိုးမည်။ ငွေကြေးစုဆောင်းမိ မည်။
တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ်စသော အခြား တွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဟော ကိန်းဖြစ်သည်။ ယခုအဟောတမျိုးထဲနှင့် ပုံသေယူ၍မရပါ။ မသိသေးသူများ သိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကူးယူရေးသားပါသည်။
သငျ့အသကျနဲ့မှေးနသေ့ာ သသေခြောခြာပွောပါ…မှနျလှနျး လို့ ထပျခါ ထပျခါ ဖတျနရေတဲ့ ဇနက ဟောကိနျး
တိကမြှနျကနျလှနျးသော ဇနကဗဒေငျ အဟောကွညျ့နညျး….
တညျဆိုတာ သင်ျဘောတညျဆောကျတာကို ပွောတာပါ။ လုပျငနျးတှအေတှကျ ကွံစညျဆဲ၊ လုပျငနျးတှအေစပွုဆဲ အခွအေနကေို ရောကျ နတေယျလို့ ပွောတာပါ။ လုပျငနျးအတှကျ ရငျးနှီးမွုပျနှံဖို့ ရနျရှာရာတှငျလှယျကူလိမျ့မညျ။
ပကျြဆိုတာ သင်ျဘောပကျြသှားတာကို ပွောတာပါ။ ကံဇာတာ ညံ့ခြိနျပါ။ စီးပှားရေးကဆြငျးမယျ။ သူမြားမကောငျးကွံတာခံရတတျသညျ။ မ တျောတဆထိခိုကျမှု အသေးအဖှဲမြား ကွုံတတျသလို သကေောငျပေါငျးလဲဝဒေနာမြား ဖွဈတတျသညျ။ ရာထူးလုပျငနျးကို နှောငျ့ယှကျမညျ့ သူ ပျေါလာလိမျ့မညျ။ အိမျထောငျရေးကို အထူး သတိထားပါ။
ကြောကျဆိုတာ မခေလာနတျသမီးက ကြောကျဖြာထကျမှာတငျပေးထားတဲ့ ကိနျးဆိုကျ ပွီဆိုတော့ ကံကောငျးပွီလို့မှတျပါ။ မမြှျောလငျ့ပဲ ကူညီမယျ့သူတှပေျေါမယျ။ အောငျပါလသေိနျးထီဆုကွီးမြား ပေါကျမယျ။ မကနျြးမမာဖွဈနရေငျတော့ ပွနျပွီးကနျြးမာလာမယျ။
ဆရာကောငျးနဲ့တှပွေီ့လို့ဟောပါ။ အမှုရှိရငျရှိနိုငျမညျ။ အခြုပျနှောငျခံနရေရငျ လှတျမညျ။ ကဆြငျးနသေော စီးပှားရေးမြား ပွနျတကျလာ မညျ။ ပညာရေးလဲကောငျးမညျ။ အိမျထောငျကလြှငျ အိမျထောငျဖကျကောငျးနှငျ့တှပွေီ့လို့ဟောပါ။ အကွံအစညျမြား အောငျမွငျမညျ။
ထီးဆိုတာ ထီးဖွူဆောငျးတဲ့ကိနျးပါ။ နာမညျကြျောကွား ထငျရှားမညျ။ ကောငျးသတငျးနှငျ့ ကြျောကွားခွငျးပါ။ ဆုလာဘျတှရေမညျ။ ဘှဲ့ ထူးဂုဏျထူးမြား ရမညျ။ စာမေးပှဲဖွထေားရငျ စာမေးပှဲအောငျမညျ။ ရာထူးတိုးမညျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား တိုးခြဲ့ရမညျ။ အိမျသဈဆောကျ ကိနျး၊ အိမျသဈရကိနျးပျေါမညျ။
နနျးဆိုတာ နနျးအပျခံရတဲ့ကိနျးပါ။ ကံဇာတာကောငျးပွီလို့ဟောပါ။ ရာထူး တိုးမညျ။ စီးပှားဖွဈထှနျးမညျ။ အမှအေနှဈတှရေမညျ။ အပွိုငျ အဆိုငျတှမှော အနိုငျရမညျ။ ရှေးကောကျပှဲတှမှော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရငျနိုငျမညျ။ အိမျထောငျကကြိနျးရှိသညျ။ အိမျထောငျကလြှငျလဲ ကံ ကောငျးမညျ။ အလှူပွုလုပျရမညျ။ မငျးစိုးရာဇာ အကွီးအကဲဖွဈမညျ။
စံဆိုတာ မငျးစညျးစိမျကိုခံယူရတဲ့ကိနျးပါ။ ဘေးအန်တာရာယျကငျးပွီး စုတျကွီး၊ လာဘျကွီးတှဝေငျမညျ။ လုပျငနျးတှတေိုးတကျမညျ။ ကွီးမား တဲ့ရာထူးတှရေမညျ။ သိုလှောငျပစ်စညျးတှကေ အကြိုးအမွတျရမညျ။ အခွှအေရံမိတျဆှအေပေါငျးအသငျး တိုးမညျ။ ငှကွေေးစုဆောငျးမိ မညျ။
တှကျကိနျးအား ပုံသကေားခမြယူပဲ မဟာဘုတျစသော အခွား တှကျကိနျးမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးဟောပွောလြှငျ အလှနျအစှမျးထကျသော ဟော ကိနျးဖွဈသညျ။ ယခုအဟောတမြိုးထဲနှငျ့ ပုံသယေူ၍မရပါ။ မသိသေးသူမြား သိစရေနျ ရညျရှယျ၍ ကူးယူရေးသားပါသညျ။
Credit: ဗဒေငျ လက်ခဏာ